Achọpụtara katalọgụ Motorola niile nke 2018 | Gam akporosis
Naanị izu ole na ole n'ime 2018, Motorola nwere ike ịnọ na nsogbu. Ejirila akwụkwọ ndekọ aha ụlọ ọrụ maka afọ a abanyela, gụnyere etiti ya na akara njedebe dị elu, Moto G, Moto Z y Moto X5. Enweghị ozi na Moto E5ọ bụ ezie na ụbọchị ole na ole gara aga anyị hụrụ leaked image nke ahụ nwere ike ịbụ nke akụkọ a.
Ke akpa mbiet anyị na-ahụ Moto Z3 na Moto Z3 Play (ikekwe nke a gosikwara Moto Z3 Force). Ngwaọrụ abụọ a ga - enwe 6-anụ ọhịa FullHD + ngosipụta dị ezigbo mkpa n'ọnụ na ihe a hụrụ na foto a, enweghị akara nke onye na-agụ mkpịsị aka, site na ihe anyị nwere ike ikwu, ọ ga-abanye n'ime ihuenyo ahụ.
N'ịga n'ihu na nzacha, anyị na-ahụ a Moto Mod nke pụtara na poolu ya nkwado maka netwọk 5G, ọ bụ ezie na teknụzụ a ka dị na nwata na ọ bụghị mma iji nweta a raara onwe ya nye Moto Mod.
Njirimara mbụ nke Moto X5
Mgbe ahụ e nwere Moto X5, otu n'ime ekwentị ndị kachasị atụ anya na 2018. Site na ihe anyị na-ahụ na ọ ga-enwe a Ngosipụta na-enweghị oke ngosi nke 5-inch na mkpebi FullHD + na ihu igwe ese abụọ na azụ. Ọzọ, mkpanaaka enweghi mkpisiaka nkpisi aka, ya mere asịrị nke mwekota na ihuenyo na-ewe ike.
N'ikpeazụ, anyị nwere ezinụlọ Moto G, anyị nwere nsụgharị atọ: Moto G6, Moto G6 Gụnyere, Moto G6 Gwuo. Ekwentị ndị a nwere onye na-agụ akara mkpisiaka n'okpuru ihuenyo, mana ha enweghị igwefoto ihu abụọ.
Moto G6 ga-enwe a Snapdragon 450 processor jikọtara ya na 3 ma ọ bụ 4 GB nke RAM na 32 ma ọ bụ 64 GB nke nchekwaỌ ga-enwe ihuenyo 5.7 nke anụ ọhịa na mkpebi FullHD.
Moto G6 Plus ga-anabata a Snapdragon 630 processor na 6GB Ram. Banyere Moto G6 Play enweghi ọtụtụ ihe ọmụma, mana anyị maara na ọ ga-enwe otu 4,000 mAh batrị na otu ihuenyo dị ka Moto G6.
N'ezie n'oge MWC 2018 Motorola ga-egosi nkọwa ọhụrụ nke ụfọdụ ngwaọrụ, ka ọ dị ugbu a anyị nwere ike idozi maka nnukwu ọnya a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » A na-edezi katalọgụ Motorola niile maka 2018
Huawei P Smart: Egosiputara ntuziaka nke uzo di omimi a